विश्व शेयर बजारका बादशाह वारेन बफेटका लगानी मन्त्र « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
विश्व शेयर बजारका बादशाह वारेन बफेटका लगानी मन्त्र
३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०३:२८
बफेट का अनुसार ‘यदि कसैले उसको आवश्यकता बेगरको सामान किन्छ भने चाडै उसले आवश्यकीय वस्तु बिक्रि गर्छ’ । कहिलेकाही मानिसहरु आफुले आवश्यक नपरेको वस्तु पनि अरुलाई देखाउनको निम्ति किन्ने गर्छन । यसै मनोविज्ञानको फाइदा उठाऊछन् विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले बिज्ञापन मार्फत । यस्तो बेला हामीले आफै संग प्रश्न गर्नु आवश्यक छ , के यो वस्तु अति आवश्यकीय छ त ? कहिँ त्यसमा बढी लगानी त हुदै छैन ।
२. बचत ‘अनावश्यक लगानी भन्दा बचत उपयुक्त’
बफेट भन्छन् ‘हिजो कसैले रुख रोपेको कारण आज तिमी छायामा बस्न पाएका छौ’ । सुनौलो भविष्यको लागि आज बचत गर्नु जरुरी छ । हामी बचत त गर्छौ तर आकस्मिक कोषको लागि भने पर्याप्त बचत गर्दैनौ किनकि हाम्रो ज्यादै ध्यान अल्पकालीन योजनाहरुमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । मानिसका आवश्यकता कहिल्यै पुरा हुदैनन् त्यसैले आजैबाट अत्यावश्यक बाहेकका सबै बस्तुहरुमा गरिने लगानी बचत गरौ र एउटा कोष बनाएर उपयुक्त ठाउमा लगानी गरौ ।
विभिन्न अनलाईन र एजेन्सीहरुको सहयोगमा
प्रकाशित : ३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०३:२८